Daawo”Heshiiska Saldhigga Berbera Waa Digo Iyo Dambas” Sh. Aadan-Siiro | Saxil News Network
Daawo”Heshiiska Saldhigga Berbera Waa Digo Iyo Dambas” Sh. Aadan-Siiro
March 11, 2017 - Written by Abdisalaan Harir
Hargeysa (Saxilnews) – Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xiirey (Sheekh Aadan-Siiro), ayaa Khudbaddii Jimcaha ee Maanta kaga hadlay Mushkiladda ka dhalata haddii Hoggaanka Muslimiintu ay Shacabka ay u taliyaan ku Maamulaan BEEN, isagoo taasi barbar-dhigaya Xaaladaha Maanta ka jira Somaliland.
Sheekha ayaa sidoo kale Khudbaddiisa kaga hadlay Arrimo badan oo ay ka mid yihiin Wareejinta Dekedda Berbera, heshiiska Saldhigga Imaaraadku ka samaysanayo Berbera iyo Musuqmaasuq uu sheegay inuu Somaliland ka jiro, kuwaasi oo uu dhammaantood ku arooriyey Shareecada Islaamka.
Sheekha oo Arrimahaa ka hadlayaana wuxuu yidhi, “Khudbaddani waxay Gogol-xaadh u tahay Sicir-bararka Maanta jira, Hooyooyinka Xoolihii ka baxeen ee ooyaya, waxay Gogol-xaadh u tahay kuwa ku faanaya Afartan Laanguruusal-baan leeyahay, kuwa ku faanaya Carruurtaydii Ingiriiska ayay joogaan, Carruurtaydu Yurub-bay wax ku bartaan, kuwa ku faanaya Heshiisyada beenta ah ee ay galaan, ee wax keliya oo la taabtaa aanay jirin ayay Qudbaddani Gogol-xaadh u tahay.”
Sheekhu wuxuu ka hadlay Dhibaatada ka dhalata Beenta, “Beenta oo Ummadda lagu maamulo oo Xaqiiqada loo sheegi waayo iyo Raadka ay ku leedahay Bulshadaasi ee ah inay Jabayso oo aanay gaadhayn waxay doonayso.” Ayuu yidhi, waxaanu intaa ku daray, “DP WORLD baynu ka kireynay Dekeddii Berbera, iyadoon Dhagax ku darin ayay Dekedda la wareegeen. Dekedda ayay intaas oo Mitir ku kordhinayaan, oo waxay gelinayaan 442 Milyan (Ayaa la inna yidhi), laakiin kuwa inna hor-fadhiyaa waxay garan waayeen in kuwa soo duulay ee inoo haysta inaynu nahay Dad Aragtidoodu tahay Laba Milyan oo Qof hoos loogu dhiibo iyo Boqol kun oo Qof la siiyo (inay ku yidhaahdaan illaa aad Dekedda dhistaan la idinku wareejin maayo). Bal Ummaddan eeg intaas oo Takhasus sidata ee khayraadeedii yaraa ee ay lahayd Shaqsiyaad u tashanayaan, ee lagu leeyahay waalla eegi doonaa (Waalla dhisi doonaan Dekedda). Mushtamaca Somaliland waxa ku jira Nin haysta 700 Milyan oo Dollar oo Kaash ah, oo awoodi kara inuu isagu qaybta Maamulka Adeegga u qaban lahaa (DP world) labaatanka Milyan ee ay innagu Gumaynayaan, ee aad Maanta arkayso Nin aan waxba uu Dadka ku odhanayo Iska tag shahaado ma haysatide, Adeer Shahaado waanu haysanaa oo ILAAHAY baa halkan nagu abuuray.”
Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xiirey waxa kale oo uu sheegay, “Culimadu waxay yidhaahdeen Beentu waa waxaad Dadka u sheegayso iyo waxa meesha yaalla oo is-khilaafsan. Sheekh Caalim ahina wuxuu yidhi ‘Beentu waa adigoo Dadka u sheega ama ku dhaqa wax Runta khilaafsan. Maanta Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah oo ah Aqoonyahannada Dhifta ah ee Xukuumadda ku jiraa illaa hadda muu saxeexin Heshiiskaa (Saldhigga Berbera), waxa lala yaabban yahay Cidda saxeexday heshiiskaa Kootarabaanka ah, kuwa ka hadlayaana waa Qaar Aqoonteedaba lahayn, Xitaa Dadka qaarkood waxa la isku haystaa Qodobbadan la qoray (ee Heshiiska) sidaynu u fasiri karaynaa.” Ayuu yidhi, waxaanu intaa ku daray, “Heshiiska Saldhigga Berbera, Adeer Digo iyo Dambas baa la kala iibinayaa. Waxan DP WORLD waxa ay Maanta waddaa waa Digo iyo Dambas, Waayo? Islaamku wuxuu ku dedaalay in heshiis kastaa noqdo Caddaan lagu kala raali yahay, markaas ayuu noqonayaa Heshiis la raaco sidii Culimadu Tilmaameen. Waxaan leeyahay waxaad gelaysana aad uga fiirsada.”
Sheekh Aadan-Siiro waxa kale oo uu khudbaddiisa kaga hadlay, “Annagu Qabaa’iilka Somaliland lama hadalno, ee waxaanu naqdinaa Koox Ummadda u heshiis ah oo Cid walba leh, in badana waan idiinka digay oo waxaanu nidhi Waar ka daaya oo Qabiilka, Waayo? haddaad Ninka ummadda boobaya Qabiil u samayso (Qabiil ka dhigto), waa Qaabka ay isticmaalaan Dadka foof-taran-habaabiya Dadka, inay yidhaahdaan reer Hebel baa lala hadlayaa, laakiin Cid walba way ku jirtaa kuwaa Dadka boobaya ee u heshiiska ah.” Ayuu yidhi, waxaanu intaa ku daray oo uu farriin u diray Xukuumadda, “Xukuumadda waxaan leeyahay waar Caqligu ha shaqeeyo, oo Heshiisyada aad gelaysaan ee Mustaqbalka Ummadda saamaynaya aad iyo aad ha looga fiirsado.”